PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - AKAGCULISEKILE OQWAQWADE ZONKE IZIBOSHWA
AKAGCULISEKILE OQWAQWADE ZONKE IZIBOSHWA
Ilanga - 2019-01-10 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE
UKUGCWALA kwentsha emajele kwenze uNhlakanipho Mpofana (20), waseZingolweni, oboshwe ejele laseWestville, eThekwini walangazelela ukwenza iziqu zobuthishela uma esephuma ezikhindini ukuze aluleke abeza ngemuva ngobunzima bokuba sejele.
Lokhu ukusho ngoLwesibili ejele laseWestville ngesikhathi eklonyeliswa ngokuqengqeleza phambili KwaZulu-Natal, waphasa wehlula zonke iziboshwa ebezifunda umatikuletsheni ngaphakathi emajele ngo-2018.
Uthi abafundi ubeluleka ngokuthi bangafuni imali esheshayo ngoba lokho akubuyiseli, ekugcineni uyaboshwa ulahlekelwe ngokuningi empilweni.
“Ngesikhathi ngiboshwa babethi ekhaya kuphelile ngami nomatikuletsheni. Ngivalelwe ngifunda uGrade-10, kodwa ngazitshela ukuthi isikhathi engisitholayo ngaphakathi, kumele ngisisebenzise ngendlela efanele, kwazise akukho okuphazamisayo okungaba yizidakamizwa namantombazane,” kusho uNhlakanipho.
Lo mfundi uthole o-A abawu-5 okubalwa oweLife Orientation, iHistory, iTourism nowesiZulu. Ubefunda eSethubeni Youth School ngaphakathi eWestville. Utshele leli phephandaba ukuthi nakuba ebaqwaqwade bonke abafundi emajele kodwa lokhu akutholile akumenelisi. Uthi ufisa ngisho ukufaka isicelo sokuba abalelwe kabusha imiphumela yakhe.
“Kangigculisekile ngemiphumela yami ngoba unyaka wonke bengiphasa kahle kakhulu. Lokhu engikutholile akusikhona ebengikusebenzela unyaka wonke,” kusho uNhlakanipho.
Utshele ILANGA ukuthi ugwetshwe iminyaka ewu-8 ngecala lokuzama ukubulala. UPitson Dviza naye othole imiphumela emihle, uthe akasafisi ukungena ezigame- kweni ezimbi ngoba usefunde okuningi.
“Ukuphasa kwami kungisize kakhulu ngoba nakuba ngangisebenza ngesikhathi ngiboshwa, kodwa bengingenalutho esandleni. Uma ngiphuma ngaphakathi ngoNdasa (March), ngizozama ukuyobhalisela iziqu ze-B.com Accounting,” kusho uPitson.
Lo mfundi uthole o-A abane okungowesiZulu, oweTravel and Tourism, iBusiness Studies noweEconomics.
UNgqongqoshe wezokuHlunyeleliswa kweziMilo, u-Adv Michael Masutha, uncome iziboshwa ngokukhathalela imfundo, wathi kalikho izwe eliyokwakhiwa ngaphandle kwayo.
Ugxeke ubugebengu wathi kubalulekile ukuba iziboshwa zifunde ngamaphutha, ziphumele ngaphandle ziyosiza isizwe.
Ngesikhathi ngiboshwa babethi ekhaya kuphelile ngami nomatikuletsheni...
ABAFUNDI baKwaZulu-Natal abayiziboshwa, uPitson Dviza (okwesobunxele) noNhlakanipho Mpofana bawuphase ngamalengiso umatikuletsheni.